Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya oo sheegtay inaan la ceyrin safiirkii soomaaliya – The Voice of Northeastern Kenya
Star FM February 17, 2019
Waxaa weli isa soo taraya hadal haynta iyo faahfaahinada ku aaddan tallaabadii dibloomaasiyadeed ee ka dhan ahayd dowladda soomaaliya taasi oo ay shalay Kenya ku dhaqaaqday.
Xoghayaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Ambasadoor Macharia Kamau ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitarka ku sheegay in Kenya aysan dalkeeda ka eryin safiirkii Soomaaliya u joogay Maxamed Axmed Nuur Tarsan.
Waxaa uu qoraalkaasi muujinaya in Ambasadoor Tarsan ay ka codsadeen in dalkiisa uu u aado wadatashi uu kala soo sameynayo Madaxdiisa xiisada taagan sidoo kale safiirkii Kenya ee Soomaaliya Ambasadoor Lucas Tumbo loo yeeray si halkan wadatashi loogu yeesho.
Maanta ayaa waxaa magaalada caasimadda u ah soomaaliya ee Muqdisho gaaray Safiirkii soomaaliya ku matalayay Kenya.
Qoraalka Macharia Kamau ayaa u muuqdo mid si dibloomaasiyadeed loogu saxayo qaabka ay warbaahinta u dhigtay tallaabadii ay dowladdu qaadday.
Macharia Kamau, xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa intaasi raaciyay in safiirka halkaasi loo diray iyo midka loo yeeray looga gol leeyahay in labada dhinacba ay xaaladda jirta ku xalliyaan qaabka ugu saxsan sido kalena loogu kalsoonyahay ee macluumaadka la isugu gudbiyo.
← Iiraan oo u yeertay safiirka Pakistan u fadhiya dalkeeda
Dowladda soomaaliya oo ka hadashay muranka kala dhexeya Kenya →